Date My Pet » 6 Soso-kevitra ara-potoana ho an'ny Manambady Smarter!
Misy fahamarinana lehibe ny teny, "Ny fitiavana jamba."
Izany ihany koa ny antony mahatonga ny 50% ny fanambadiana ao amin'ny U.S. misaraka.
Na dia mety hanome ny tsy fahalalana sambatra tany amin'ny toerana maro, naka amin'ny mpiara-miasa fa ny fiainana dia tsy ny iray amin'izy ireo. Ny zavatra tsy fantatrao dia afaka mitarika ho amin'ny tantara an-tsehatra isan'andro, adin-tsaina, salama, unmet fanantenana, fahoriana, ary nanapaka ny fifandraisany tamin'ny farany ....
Fa misy vaovao tsara.
Tsy manana fifandraisana milalao roulette amin'ny ho avy. Azo atao ny manoratra tsara fiafara ny tantara, raha mieritreritra mialoha eo anatrehanao nanambady.
Ity lahatsoratra ity dia natao ho amin'izany tanjona.
Maro amin'ireo fanamarihana sy ny tolo-kevitra tsara Mifototra amin'ny Ole 'ny fahaiza-, traikefa sy ny lojika. Ny hafa kosa dia avy amin'ny zava-misy ny hira seho, Bridezilla.
Ireto misy zavatra vitsivitsy tokony ho fantatrareo ny hampitombo ny fitiavana IQ.
6 Ireo fitsipika sy fomba amam-panao ho Manambady Smarter:
1. Fantaro fa ny fanambadiana dia tsy manamboatra izay rehetra tapaka.
Marina izany. Halako ny ho "Debbie Downer" eto; fa marina izany. Ny olana amin'ny fitantanana ny hatezerana, immaturity, filokana, fitiavan-tena, ary miantsena fahazaran-dratsy tsy ho sitrana noho ny fifandraisana fotsiny dia ambony ny toerana ara-panambadiana. Indrisy anefa fa, naka amin'ny vady dia be toy ny mividy ny "toy ny" order. Na inona na inona ny toe-javatra, izany anao izao. Mifidy tsara mba tsy mpividy ny nenina.
2. Na dia mifanohitra mahasarika, mpivady amin'ny fototra commonalities mazàna mba haharitra intsony.
Tsy misy olona tokony hanambady ny karbaona dika mitovy ny tenany. Ho mankaleo, dia manatera kely teny an-dalana ny fitomboana sy ny fientanam-po. Na izany aza, Misy zavatra vitsivitsy ny roa tokony itovizantsika. Anisan'izany ny tanjona, danja ny rafi-, ary farafahakeliny ny iray na roa, na fialam-boly mahaliana. Ireto misy faritra hafa mba handinika: Firy ny ankizy hanao ny roa tianao? Fampakaram-bady lehibe na kely? House na trano? Mahazo ny hevitra eto?
3. Raha hijery ny mailaka, mamaky ny haino aman-jery ara-tsosialy kaonty, na ahantòny ny antso an-telefaonina, "Houston misy olana."
Ny fahombiazana ny rehetra maharitra, fifandraisana lehibe naorina teo ambonin'ny fahatokiana. Ary na ianao na ianao tsy. Na dia nisy aza ry namana milaza fa raha misy na inona na inona afenina, dia tokony ho afaka manana Carte Blanche tafahoatra ny vadiny ny tantara. Tsy voatery ho–rehetra mendrika ny hoe manana fiainana manokana. Indray, fitokisana dia tsy maintsy! Izany dia mazava ho azy, raha tsy hoe ny mpiara-miombon'antoka dia manana tantara mifono fitaka. Izany lahatsoratra iray hafa amin'ny fotoana hafa.
4. "Jereo lalina eo anatrehanao fitsambikimbikiny,"Mpitsara Mablean taloha azy foana ny hoe fitsarana TV malaza fampisehoana. Ary ny tena mahasoa ny fanarahana.
Alohan'ny "hitsambikina ny kifafa" haka ny fotoana ilaina mba hahafantatra ilay olona. Mahatsapa vanim-potoana vitsivitsy miara-. Jereo ny fomba / Ny fihetsik'i amin'ny fotoana adin-tsaina, nandritra ny fotoana tsara sy ny ratsy, nandritra ny aretina sy ny fahasalamana, ny tandrify vokatra.
5. Ataovy zava-dehibe indrindra amin'ny fomba fijery araka ny tokony ho.
Isan-kerinandro ny Bridezilla, ho vavolombelona amim-pahendrena mpijery nivory manao fanapahan-kevitra ny sasany fa mahatsikaiky. Aza ho iray amin'izy ireo. Ity misy ohatra iray. Ny ampakarina handany $60,000 amin'ny fampakaram-bady, na dia manana asa izay izy ny fanaovana $24,000 ny taona. Ny mpivady, vokatr'izany, manomboka ny firaisana avy amin'ny vesatry ny trosa mavesatra nitaingina ny lamosiny. Na miaina miaraka amin'ny in-lalàna ho an'ny taona vitsivitsy voalohany. Tsy mangatsiaka. Fantatrao ve fa ny iray amin'ireo antony mahatonga ny fisaraham-panambadiana mpitarika dia lafiny ara-bola? Tadidio fa ny fampakaram-bady iray monja andro, raha ny fanambadiana dia natao ho mandrakizay. Na dia ny ara-dalàna ny ampakarina mba te-hahatsapa toy ny "andriambavy" azy manokana amin'ny andro, dia tsy tokony handany tahaka ny "fianakavian'ny mpanjaka."
6. Anton-javatra ny fivavahana ho any amin'ny tantaram-pitiavana mira.
Ny fananana fototra ara-panahy dia afaka manampy mba handresy ny oram-baratry ny fiainana, ary manome hery sy tari-dalana, nandritra ny fotoan-tsarotra.
Manaraka ireo kardinaly enina fitsipi-fanambadiana nandritra ny taona maro ny ara-dalàna sambatra.
Tena ilaina ve ny Firaisana Ara-nofo?